चर्चा कमाएपछि डाहा गर्नेहरू बढ्ने नै भए - साप्ताहिक
साप्ताहिकमा मनोरञ्जनका समाचारभन्दा बढी विज्ञापन छापिएजस्तो लाग्यो । समाचार तथा लेखहरूलाई पनि प्राथमिकता दिनुपर्‍यो । पत्रिकाको स्वाद मर्नु भएन ।
साप्ताहिक नराम्रो हुने त कुरै भएन, तर ज्ञान–गुनका कुराको कमी पो
भयो कि ?
भुइँमान्छेको मुक्तक मीठो लाग्यो । यस्तै मुक्तकहरू पढ्न पाइयोस् ।
चर्चा कमाएपछि डाहा गर्नेहरू त बढ्ने नै भए (मनोरञ्जन समाचार : अरूलाई डाह) । यो त प्रगतिको संकेत पो हो ।
पुस्तकको अंश पढ्दा त कथा राम्रै छ जस्तो लाग्यो (साहित्य : बिनिता बरालको उपन्यास अंश) । सिंगो पुस्तक नपढी प्रतिक्रिया दिन सकिँदैन ।
धेरै जनसंख्या हुँदा राम्रा खेलाडी उत्पादन हुने भए आज चीन र भारतले वल्र्डकप खेल्नुपर्ने थियो (खेलकुद : कथा परीको जस्तो) । लगाव, धैर्यता र निरन्तरको अभ्यासले मात्र राम्रो
परिणाम दिन्छ ।
घरी सवारी जरिवाना बढी उठाउने, घरी सडक कर बढी लिने अनि अनेक काम गरेर लुट मच्चाउने धुनमा लागेको छ नेपाल सरकार (साइन्स एन्ड टेक्नो : अब सबै सवारी साधनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट) । अब यो नम्बर प्लेटका नाममा कति रकम उठाइने हो कुन्नि ?
ज्यान बनाउने दाइको कुरा मलाई मन पर्‍यो (मनोरञ्जन समाचार : ज्यान बनाउने निर्देशक) । म्युजिक भिडियो बनाउँदा–बनाउँदै उनले बटुलेको अनुभव चलचित्रमा काम लाग्यो । अनुभवले नै मानिसहरूलाई तिखार्छ ।
रिस, राग, अहं, ईष्र्या एवं भौतिक इच्छा नत्यागेसम्म मानिसले कहिल्यै साँचो सुख प्राप्त गर्न सक्दैन (युवा मन : किन सुखी छैन ?) । सुख त मनले महसुस गर्ने कुरा हो ।
यो एप्स एकदमै उपयोगी रहेछ (साइन्स एन्ड टेक्नो : मोबाइलमा बाढीपहिरोको जानकारी) । यस्तै अन्य एप्सहरूका बारेमा पनि जानकारी दिनुपर्‍यो ।
अब गमलामा धान रोपेर खान पुग्ने रहेछ । मन्त्रीबाटै सुरुवात भएकाले मानिसले बच्चा जन्माउन चाहे गिलास अथवा कुनै कचौरामा बच्चा हुर्काएर यो मेरो छोरा वा छोरी भन्ने वातावरण मिलाउनुपर्‍यो (गजुरियल : गमलामा रोपाइँ) । यस्तो भयो भने खेतबारीको हिलोमा जानु नपरेझैं महिलाले ऐया र आत्था गर्नु परेन, सजिलो हुन्छ अनि खर्च पनि हुँदैन ।
रजनीले अभिनय गरेका दुवै चलचित्र राम्रो चलून् (रजनीको मिलाउने माया) । यसबाट उनको सक्रियता पनि बुझिन्छ ।
यसरी पनि कोकिनको कारोबार हुँदा रहेछन् (घोडाको टाउकोमा कोकिन) । आखिर चोरी–तस्करीका हजार बाटा रहेछन् ।
सुनवर्षी पोखरीका बारेमा पढ्न पाउँदा खुसी लाग्यो । ओझेलमा परेका अन्य यस्ता ठाउँका बारेमा निरन्तर जानकारी पाइयोस् ।
साप्ताहिकमा प्रकाशित रोमान्टिक झरी निकै रमाइलो लाग्यो । वर्षायाममा कस्तो खानपान गर्ने, स्वास्थ्यको कसरी ख्याल गर्ने, कस्तो पहिरन लगाउने भन्ने विषयमा पर्याप्त जानकारी पाइयो ।
असार २४ देखि ३० गतेसम्मको राशिफल
भीआर हेडसेटको चर्चा